प्रेमको लागि ७ जनाको हत्या गरेकी महिलालाई देशको इतिहासमै पहिलो पटक फाँसी दिइँदै!!! – News Nepali Dainik
प्रेमको लागि ७ जनाको हत्या गरेकी महिलालाई देशको इतिहासमै पहिलो पटक फाँसी दिइँदै!!!
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण ०५, २०७७ समय: १६:०६:१७
प्रेमको लागि ७ जनाको बन्चरोले हानेर हत्या गर्ने एक महिलालाई फाँसीको सजाय दिने तयारी सुरु भएको छ । यी महिला देशको इतिहासमै फाँसीको सजाय पाउने पहिलो महिला बन्दैछिन् । स्वतन्त्र भारतमा अहिलेसम्म कुनै महिलालाई फाँसीको सजाय दिइएको छैन ।
Last Updated on: February 17th, 2021 at 4:06 pm
२०४८७ पटक हेरिएको